Samuel Nhoma A Ɛto So Abien 5:1-25
Wosii Dawid hene wɔ Israel nyinaa so (1-5)
Ɔko faa Yerusalem (6-16)
Sion bɛyɛɛ Dawid Kurow (7)
Dawid dii Filistifo so nkonim (17-25)
5 Akyiri yi, Israel mmusuakuw nyinaa behyiaa Dawid wɔ Hebron+ bɛkae sɛ: “Hwɛ, yɛyɛ wo dompe ne wo honam.*+ 2 Efi tete a Saul di hene nyinaa, wo na na wudi Israel anim de wɔn kɔ ɔko;*+ ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Wo na wobɛyɛn me man Israel, na wo na wubedi Israel anim.’”+ 3 Enti Israel mpanyimfo nyinaa baa ɔhene nkyɛn wɔ Hebron, na Ɔhene Dawid ne wɔn yɛɛ apam+ Yehowa anim wɔ Hebron. Ɛnna wɔsraa Dawid de no sii Israel so hene.+ 4 Dawid bedii hene no, na wadi mfe 30, na odii ade mfe 40.+ 5 Odii Yuda so hene mfe 7 ne abosome 6 wɔ Hebron, na odii Yuda ne Israel nyinaa so hene mfe 33 wɔ Yerusalem.+ 6 Ɛnna ɔhene ne ne mmarima kɔɔ Yerusalem sɛ wɔne Yebusifo+ a wɔtete asaase no so no rekɔko, nanso wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Worentumi mma ha da! Anifuraefo ne mpakye na wɔbɛpam wo.” Adwene a wonyae ne sɛ: ‘Dawid remma ha.’+ 7 Nanso, Dawid ko faa Sion abannennen a seesei wɔfrɛ hɔ Dawid Kurow no.+ 8 Ɛnna Dawid kae saa da no sɛ: “Wɔn a wɔbɛtow ahyɛ Yebusifo so no, ma wɔmfa suka no mu nkokunkum ‘mpakye ne anifuraefo’ a Dawid kyi wɔn* no!” Ɛno nti na wɔka sɛ: “Onifuraefo ne apakye remma ofie hɔ da” no. 9 Afei Dawid kɔtenaa abannennen no mu, na wɔfrɛɛ hɔ* Dawid Kurow. Na Dawid fii ase sisii adan wɔ Esiw no*+ so ne mmeae foforo wɔ kurow no mu.+ 10 Enti Dawid kɔɔ so yɛɛ den,+ na asafo Nyankopɔn Yehowa dii n’akyi.+ 11 Tiro hene Hiram+ tuu abɔfo kɔɔ Dawid nkyɛn, de sida nnua+ ne dua adwumfo ne abantofo kaa ho kɔe, na wofii ase sii ofi* maa Dawid.+ 12 Dawid behui sɛ Yehowa ama n’ahenni atim wɔ Israel so,+ na Onyankopɔn man Israel nti,+ wama n’ahenni so.+ 13 Bere a Dawid fi Hebron bae no, ɔsan faa mpenafo,*+ na ɔwaree yerenom foforo wɔ Yerusalem, na Dawid san woo mma mmarima ne mma mmea wɔ hɔ nso.+ 14 Ne mma a ɔwoo wɔn wɔ Yerusalem no din ni: Sammua, Sobab, Natan,+ Solomon,+ 15 Ibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, 16 Elisama, Eliada, ne Elifelet. 17 Bere a Filistifo no tee sɛ wɔasra Dawid asi no hene wɔ Israel so no,+ wɔn nyinaa bae sɛ wɔne Dawid rebɛko.+ Dawid tee no, ɔkɔɔ abannennen no mu.+ 18 Ɛnna Filistifo no bae, na wɔbɛnantenantew Refaim Bon no mu.*+ 19 Dawid bisaa Yehowa sɛ:+ “Menkɔ Filistifo no so anaa? Wode wɔn bɛhyɛ me nsa?” Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Kɔ, na ɔkwan biara so mede Filistifo no bɛhyɛ wo nsa.”+ 20 Enti Dawid kɔɔ Baal-Perasim, na Dawid kokunkum wɔn wɔ hɔ. Ɛnna ɔkae sɛ: “Yehowa adi m’anim abu afa m’atamfo so+ sɛnea nsu bu fa nneɛma so no.” Ɛno nti na ɔfrɛɛ hɔ Baal-Perasim*+ no. 21 Filistifo no gyaw wɔn anyame hɔ kɔe, na Dawid ne ne mmarima no sesaw kɔe. 22 Akyiri yi, Filistifo no san bae, na wɔbɛnantenantew Refaim Bon no mu.*+ 23 Ɛnna Dawid bisaa Yehowa, nanso ɔkae sɛ: “Nkohyia wɔn. Kɔ na kofi wɔn akyi bra, na tow hyɛ wɔn so wɔ baka* nnua no anim. 24 Ɛba sɛ wote nnyigyei a ɛte sɛ nnipadɔm nantew wɔ baka nnua no so a, keka wo ho saa bere no, efisɛ ɛno bɛkyerɛ sɛ Yehowa adi w’anim rekokunkum Filistifo asraafo no.” 25 Enti Dawid yɛɛ nea Yehowa kae no pɛpɛɛpɛ, na okunkum Filistifo no+ fi Geba*+ de kɔe ara kosii Geser.+
^ Anaa “Dawid kra kyi wɔn.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔfrɛɛ hɔ.”